I-Telegraph ye-Mac ifumana olunye uhlaziyo olwahlulwe lwaba zindawo ezintathu | Ndisuka mac
I-Telegram ye-Mac ifumana olunye uhlaziyo lwahlulwe lwangamacandelo amathathu
Kwaye yile veki ukusukela ngoMvulo ophelileyo ukuba uhlobo lokuqala olufumanekayo lokuhlaziya usetyenziso lwalutsibela, ezinye iinguqulelo ezimbini ezintsha zongezwa ukulungisa iingxaki. Ke ukuba ungomnye wabasebenzisi abaneTelegram efakwe kwi-Mac, jonga iVenkile ye-App kuba iqinisekile ukuba unenguqulelo yamva nje efumanekayo yokukhuphela, kule meko ngu-2.99.3.
Kuqhelekile ukufumana uhlobo olutsha lwesicelo seTelegram kwi-Mac rhoqo, kodwa kule veki banesiphene kuhlobo lokuqala kwaye bakhuphe ezinye iinguqulelo ezimbini ngokulandelelana. Kule yokugqibela amanqaku acacisa gca ukuba basombulule ntoni: Ukulungiswa kwengozi
Ndimele nditsho ukuba mva nje ukusukela kuguqulelo 2.99 lwenyanga kaMeyi, ngamanye amaxesha isicelo savalwa ngokungalindelekanga. Ayisiyonto iqhelekileyo kwesi sicelo kodwa kuyinyani ukuba ukuphinda ubhale ngokutsha kulwimi lweSwift kuzise iingxaki esinokuthi sizithathe njengesiqhelo. Ukukhankanya ezinye zezi ngxaki okanye ukusilela, kukho enye ekukhetheni ngokuthepha kabini «Phendula». Xa umsebenzisi ebhala izivakalisi ezimbalwa ngokulandelelana kwaye sifuna ukuphendula ngqo kumsebenzisi ofanayo ngalolu khetho «Phendula» ithatha kuphela izivakalisi ezibhaliweyo kunye ayikuvumeli "ukucaphula" isivakalisi sesibini salo msebenzisi mnye.
Ezi ziinkcukacha ezincinci eziqhubekayo ukupholishwa kwiinguqulelo ezintsha kwaye esele sixele kumqambi ukuba azilungise. Ngokwenyani usetyenziso lusebenza kakuhle, kodwa kubalulekile ukuba baqhubeke nokusebenza kuyo ukushiya kwinqanaba elinye naxa bagqiba kwelokuba baphinde babhale ngokupheleleyo. Ukuba unesiphene, ukusilela okanye ingxaki ngayo, ungathandabuzi ukuthumela ingxelo kumphuhlisi kwisicelo ngokwaso kwiiSetingi> Buza umbuzo okanye kwiwebhusayithi yayo Yocingo.org.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » I-Telegram ye-Mac ifumana olunye uhlaziyo lwahlulwe lwangamacandelo amathathu
I-8x37 Podcast: WWDC 2017 Rhoqo
Ukuhamba kukaBozoma Saint John e-Apple ukuya e-Uber kuqinisekisiwe